Computer Kutenga kune Vakaremara
Posted on January 2, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Iko kushandiswa kwekombuta kuri kwese kwese. Kunyanya kubvira kufambira mberi kwakasiyana siyana kwatave nako makore gumi aya. Chero ani zvake anogona kutenga imwe yakaderera zvakadaro mutengo kuti vanhu vatanga kutenga nekuvatengesa nekuda kweizvi. Kuva wiricheya kusungwa harisi dambudziko kana zvasvika pa kushandisa kombiyuta. Iwe zvakare haudi desktop, nekuti unogona kushandisa laptop uye kuitakura kwese kwaunoenda. Isu takwira zvakanyanya zvekuti mafoni edu anowanzoonekwa sehomwe makomputa. Haasi ese mafoni akagadzirwa akaenzana kunyangwe nekuti vamwe vane simba rakawanda kupfuura vamwe. Muchikamu chino, tichaenda pamusoro pedzimwe nzira dzaunogona kutenga komputa kana iwe usati uine imwe kare. Zvakare, nei uchifanira kuve neyako komputa kana laptop zvishoma.
Kana iwe usina komputa parizvino saka iwe unofanirwa kufunga nezve kutenga imwe. Iyo zvinobatsira kure kupfuura zvakashata. Unogona kutanga nekufunga huwandu hwesimba raunoda pakombuta yako. Makomputa anouya mune akasiyana masimba uye skrini resolution. Izvi tungamirira ichaenda zvakadzama maererano nekutenga yakakwana PC inokodzera zvaunoda. Kana iwe usingade kuverenga iwe unogona kugara uchitora kurudziro kubva kushamwari dzako kana nhengo dzemhuri. Iko kunogara kune sarudzo yekutarisa YouTube mavhidhiyo ongororo aunogona kutarisa. Ingo tsvaga kumusoro iwo makomputa iwe auri kufunga zvakanyanya uye enzanisa imwe neimwe kusvikira iwe wawana anokunda.
Kana iwe usiri kuda kutenga iyo komputa nyowani, makomputa anoshandiswa anogona kunge ane njodzi shoma kana ukasarudza kutenga imwe kubva kumunhu wausingazive. Nezve chiitiko, ivo vanogona kunyepa nezve mafekitori emakomputa kana ivo vakaona kuti iwe hauzive zvakawanda nezve iyo nyika yekombuta. Pfungwa yakanaka kubvunza shamwari inoziva uye inotsvaga rairo yavo sezvo ivo vachiziva zvavari kutaura nezvazvo. Ehezve, kutenga kubva kune mutengesi muchikamu chakashandiswa ndiko kubheja kwako kwakanyanya kana ukasarudza kuenda nenzira yekutenga komputa yakamboshandiswa.
Ndezvipi Zvimwe Zvingangodiwa?
Kana iwe ukatenga komputa yedesktop, hongu, iwe uchazoda tafura yekuenda pamwe nayo. Kune makambani mazhinji anogadzira remara madhesiki ane hushamwari. Dzvanya pano kuona mishoma mienzaniso yekuti rimwe remadhesiki aya raizotaridzika sei. Iwe unogona kugadzira zvekugadzira uye kutenga rakajairika tafura uye woita yako wega wiricheya inoshamwaridzika tafura ine zvishoma zvigadzirwa.
Paunenge iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga izvozvo. Iyo software inogona kudhura asi nerombo rakanaka vane miedzo yemahara, saka unogona kuona kana iwe uchida kutenga rezinesi rechirongwa. Laptop kana desktop zvishongedzo zvichauya zvinobatsira zvakare. Nyika yekuwana yakakura kwazvo uye unogona kuwana chero chaunoda. Amazon ndeye webhusaiti hombe inogara ese aya akasiyana magadget aunogona kutenga ako komputa nyowani. Chinhu chakanaka nezveAmazon ndechekuti mazhinji emidziyo haamhanye iwe anodarika zana remadhora uye muzviitiko zvakawanda anokumhanyisa isingasvike $ 100.
Kufunga Kwakanaka Kupfuura neWiricheya